DF “Qiimeynta qorshihii aan kula wareegi laheyn amniga ayaan bilaabeynaa” – XAMAR POST
Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga ee Xukuumada Soomaaliya C/rashiid C/laahi Maxamed ayaa Golaha Wasiirada Soomaaliya horgeeyay qorshaha qiimeynta Ciidamada Xoogga dalka ay kula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka.
Sidoo kale Wasiirka ayaa ka hor sheegay Golaha Wasiirada in ay meel wanaagsan marayaan qorshayaashaasi islamarkaana la soo bandhigi doono.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Soomaaliya Eng C/raxmaan Yariisoow ayaa warbaahinta u sheegay in dhawaan qubaro ka socda Ciidamada dalka ay gaarayaan gobolada dalka ayna soo sameynayaan qiimeyn ku saabsan arrintaasi.
Sidoo kale waxa uu xusay in Xukuumada ay ku dadaaleyso sidii xuquuqdooda loo joogteyn lahaa Ciidamada, isaga oo sidoo kale tilmaamay in Ciidamada Xoogga dalka ay la wareegayaan sugidda ammaanka guud ee dalka.
Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale waxaa la horkeenay Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidamada Qalabka Sida oo abuuri doona in la dhiso Hay’ada Xaqsiinta Ciidamada si ciidamada howlgabka ah, kuwa dhaawacma ee curyaama iyo agoontaba loo siin lahaa waxii ay xaq u leeyihiin. Golaha ayaa loo qeybiyey nuqulka Hindise Sharciyeedka si ay u soo darsaan oo kulamada danbe loo ansaxiyo.